LG မူပိုင်ခွင့်ကထုတ်ဖော်ပြသသည်မှာ၎င်းသည် waterdrop notch ပါသောဖုန်းကိုပြင်ဆင်သည် Androidsis
သင်ဟာရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်များနည်းပါးသောဖုန်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား waterdrop တစ်ချိန်တည်းတွင် LG ဖုန်းများ၏ပန်ကာတစ်ခု (ရေစက်)? ကောင်းပြီ၊ မကြာခင်မှာပဲသင်က၎င်း၏ panel ပေါ်သေးငယ်တဲ့ထစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားမိုဘိုင်းကိုဝယ်ယူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းများ၌မတွေ့ရသေးသောနောက်အသစ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့သည် အသစ်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းမူပိုင်ခွင့်အသစ်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG သည်နောက်မျိုးဆက်သစ်အထင်ကရစမတ်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေပြီး၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် LG က G8 ThinQနှင့် ပေါက်ကြားပြန်ဆို ဒီပစ္စည်းဟာမျက်နှာပြင်ထိပ်မှာပုံမှန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ notch နဲ့အတူလာလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးလိုပါတယ် ရေစက်များနှင့်ရေပန်းစားသောထစ်ဒီဇိုင်း။ ထို့ကြောင့်ဤကိရိယာသည်အနည်းဆုံးနှင့်လာနိုင်သည် ထစ်ထို့အပြင်ခန့်မှန်းသည်အတိုင်း။
LG မှနောက်ဆုံးပေါ်မူပိုင်ခွင့်အရ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားနေသည် waterdropမျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်Aprilပြီလကကုမ္ပဏီကပထမဆုံးထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင်ကျောဘက်တွင်ဒေါင်လိုက် dual dual ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းနှင့်နောက်ဖက်မျက်နှာပြင်လက်ဗွေစကင်နာတို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ပုံကြမ်းများကိုကြည့်သည့်အခါဖုန်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကမြောင်းထဲရောက်နေပြီး SIM ကဒ်ထည့်စရာတစ်ခုထည့်ထားတယ်။ ပါဝါခလုတ်ခလုတ်သည်ညာဘက်အခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးအသံထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များကိုဘယ်ဘက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤအတောအတွင်းကုမ္ပဏီကစမတ်ဖုန်းကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည် LG က G8 ThinQ နှင့် LG က V50 ThinQ 5G လာမည့်လတွင်ကောလဟာလအဖြစ်စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 2019 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပွဲတွင်အခြား mid-range ထုတ်ကုန်များစတင်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG, ရေစုပ်စက်များနှင့်ဖုန်းများမကြာမီထုတ်လုပ်တော့မည်
Q12, စပိန်တွင်အောင်ပွဲခံသည့်ပြိုင်ပွဲသည်လက်တင်အမေရိက # Q12Mex တွင်ဖြစ်သည်